Yiziphi izinzwa ezingathandeki ku-urethra
Ukuzwa okungajabulisi ku-urethra (ubuhlungu, ubuhlungu lapho uchama) kufanele kuhlale busabeka, njengokwelapha okungakafiki kukhona, isibonelo, ingozi yokuhlakulela i-prostatitis engapheli, i-epididymitis, ebangela ukungabi namuntu emadodeni. Ukutholakala okungaziwa kwezifo ezingasetshenziswa kahle kuyingozi nakakhulu.
Ukucaciswa kwesizathu sokungahambi kahle ngesikhathi sokuvuthwa kuhlinzekwa yi-syndrome yezinhlungu ezijulile (uhlamvu, indawo yangakini, isikhathi sokuqala kobuhlungu).
Ukubonakala okungazelelwe kobuhlungu obunzima phakathi nokuvuthwa kungabangelwa ukwelashwa okunamandla (ukuhamba kwamatshe, ukuhlukunyezwa) noma inqubo yokuvuvukala okunzima.
Ubuhlungu obukhulu, ukuvutha, umuzwa wokuvama endaweni yesifundazwe kubonisa inqubo engapheli.
Ukwaziswa okuyisikhathi yisikhathi sokuqala kobuhlungu be-syndrome. Isibonelo, ukubukeka kobuhlungu ngaphambi kokucubungulwa kubangelwa ukwelula kwesisu futhi kuhlotshaniswa nokuvuvukala kwawo (cystitis), isisu, njll. Ukuvuvukala esigabeni sokuqala se-urethra (nge-polyps in the urethra, emanzini wamatshe, i-urethritis ephawulekayo) kuboniswa ubuhlungu be-syndrome obwenzeka ekuqaleni kokuvuthwa . Ubuhlungu obonakala ekupheleni kokugcoba futhi kancane kancane buya, kuphakama lapho isisu sisuswa (ukubonakala kobuhlungu) bese kuphelelwa ukugcwaliswa okulandelayo (ubuhlungu bokusizwa). Ngokujwayelekile lihlotshaniswa nesisu esentanyeni yesisu, itshe noma umzimba wangaphandle esikhwameni, i-prostatitis.
Ukutholakala kobuhlungu ngokuvamile kubonisa isitho esithintekile: ubuhlungu endaweni ye-urethra bubonisa isilonda se-urethra, ngenhla kwe-pubis - mayelana nomonakalo wesigcawu, ku-perineum - mayelana nokugula kwesifo se-prostate. Ubuhlungu obubekwe e-clitoris kwabesifazane noma ekhanda le-penis emadodeni, buyinto ejwayelekile ngamatshe esithombeni. Izilonda ze-prostate zihambisana nobuhlungu obuya e-rectum. Ukusabalala kokutheleleka ezingxenyeni ezingenhla (isisu, izinso) kuhambisana nokubukeka kobuhlungu esifubeni noma eceleni.
Nakani! Ubukhulu be-pathology abuxhomeki ebuqini be-syndrome yobuhlungu. Isibonelo, emdlavuza wesi-prostate eziteshini zokuqala, kungenzeka kube khona izimpawu nakancane, futhi kamuva kuphela kuzoba nezinhlungu ezilinganayo kanye nobunzima bokudlula umchamo.
Ngezinye izikhathi ukuzwa okungahambi kahle nokuzwa okungajabulisi ku-urethra kwenzeka ngemuva kokuthatha imithi, i-acidic, isiphuzo noma iziphuzo ezidakayo. Kulaba besifazane, ukuzwa okungajabulisayo ku-urethra kungahlotshaniswa nezifo zesibindi kanye nezingxenye zokusebenza, ngokucindezelwa kwesibeletho esikhulisiwe ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuvutha emthonjeni emadodeni, okuhambisana nokuzwa okubuhlungu lapho uchama, kuyisibonakaliso se-urethritis. I-urethritis ibuye ibonakale ngokubonakala kokukhipha ku-urethra, kaningi ekuseni. Kuye nge-pathogen eyabangela ukuthuthukiswa kwe-urethritis, ukukhishwa kungaba:
I-gray-yellow (gonorrheal urethritis);
Ukugcoba noma ukukhanya (trichomoniasis urethritis);
I-Purulent (i-urethritis ye-bacterium).
Ezinsukwini zakuqala, ukuzwa okungajabulisi ku- urethra kuvame ukuncane, kepha njengoba ukuvuvukala kuqhubeka, amandla abo akhula. I-urethritis iyingozi ngokuthuthukiswa kwesibindi esifubeni nasezinsweni, kanye nasezikhungweni eziseduze. Ngakho-ke, izimpawu ezifana nemidwebo, ubuhlungu ku-urethra kufanele ngaso sonke isikhathi busabe futhi kubangele ukwelashwa ngokushesha.
Izimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa kwe-meningitis ehlanzekile kubantu abadala nasezinsana
I-coma ende kunazo zonke, noma impilo yonke engenayo ulwazi
Ikhishi odongeni amakhabethe: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo?
U-Alexander Kharlamov - indodana yomdlali omkhulu we-hockey
Izinzipho ezinhle. Ffrench Patterned